Basic Political Science Part (6) ~ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
Basic Political Science Part (6)
Friday, July 24, 2009 0000 No comments
အခြေခံ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ အပိုင်း (၆)
နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်နှင့် သဘောတရားများ အပိုင်း (၃)
လူကို တန်ဖိုးထား တွေးခေါ်တတ်သော ကွန်ဖြူးရှပ်သည် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာရပ်များကိုလည်း လူမှုဆက်ဆံရေး ရှုထောင့်မှ သုံးသပ် ရှုမြင်လေ၏ ... ။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အခြေခံမှာ ဖခင် အုပ်ချုပ်သော မိသားစုဖြစ်၏ ... ။ နိုင်ငံဆိုသည်မှာ မိသားစုကို တိုးချဲ့ထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ကွန်ဖြူးရှပ်က ယူဆ၏ ... ။
ကွန်ဖြူးရှပ်က နိုင်ငံတော် အစိုးရသည် တိုင်းသူ ပြည်သားများအပေါ် ကောင်းကျိုးချမ်းသာ ရရှိနိုင်စေရန် ကြိုးစား အားထုတ်ရမည် ... ။ ထိုသို့သော အစိုးရသည် စွမ်းရည်ရှိသူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အစိုးရမျိုး ဖြစ်ရမည် ... ။ စွမ်းရည်ရှိနိုင်ရန် မိဘမျိုးရိုးအပေါ် အခြေမခံဘဲ အကျင့်စာရိတ္တနှင့် အသိပညာပေါ်တွင် အခြေခံရမည် ... ။ အသိပညာနှင့် စာရိတ္တကောင်းမွန်းရေးမှာလည်း သင့်တော်သောပညာ သင်ကြားလေ့လားရေးတွင် အခြေခံသည် ဟုဆိုပါသည် ... ။
ကွန်ဖြူးရှပ်၏ နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်သည် ၎င်း၏ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ အယူအဆနှင့် မိရိုးဖလာ ထုံးတမ်း စဉ်လာတို့တွင် အခြေခံထားကြောင်း တွေ့ရ၏ ... ။ အုပ်စိုးသူများသည် ကောင်းသော အကျင့် စာရိတ္တ ရှိခြင်းနှင့် အသိပညာ ရှိခြင်းသည် အောင်မြင်သော အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်ပင် ဖြစ်သည် ... ။
ကွန်ဖြူးရှပ်၏ အဆိုအရ ... အုပ်ချုပ်သူတွင် အောက်ပါ အခြေခံ တာဝန်ဝတ္တရား (၉) ရပ်ကို ထမ်းဆောင် ရမည်ဟုဆို၏ ... ။
1. မိမိ၏ အကျင့် စာရိတ္တကို အမြဲတစေ ကောင်းမွန်အောင် ပျိုးထောင်နေရမည်။
2. အရေးပေးထိုက်တဲ့သူကို အရေးပေးရမည်။
3. မိမိ၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများအား ချစ်ခင် မြတ်နိုးရမည်။
4. ၀န်ကြီးများအား ရိုသေ လေးစားရမည်။
5. အရာရှိ အရာခံ အားလုံး၏ ကောင်းကျိုးအတွက် အရေးတယူ ဂရုပြုရမည်။
6. တိုင်းသူပြည်သား သာမန် ပြည်သူများအား ဖခင်သဖွယ် ဂရုပြုရ စောင့်ရှောက်ရမည်။
7. အသုံးဝင်သော လက်မှု ပညာရပ်များ အားလုံးကို တိ်ုးတတ်အောင် အားပေး ချီးမြှင့်ရမည်။
8. နိုင်ငံခြား တိုင်းတစ်ပါးသားများကို ပျူငှာစွာ ဆက်ဆံရမည်။
9. အိမ်နီးနားချင်း နိုင်ငံများမှ မင်းညီမင်းသားများနှင့် မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်းသဖွယ် ဆက်ဆံရမည် ဟူ၍ ဖြစ် သည်။
အုပ်ချုပ်သူသည် မိမိ၏ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်အောင် အမြဲတစေ ပြုစုပျိုးထောင်ရမည် ဟူသော အချက်သည် အလွန်မှပင် အရေးကြီးပါသည် ... ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဤသို့ ပြုစု ပျိုးထောင်မှသာ အုပ်ချုပ်သူ အနေနှင့် မိမိ၏ အကျင့် စာရိတ္တအားဖြင့် မိမိ အရာရှိ အရာခံများနှင့် မိမိ၏ တိုင်းသူ ပြည်သားများအတွက် စံပြဖြစ် ပေလိမ့်မည် ... ။
ထို့ပြင် အစိုးရကောင်းတို့တွင် ပြည်သူ ပြည်သားတို့၏ စားဝတ်နေရေး လိုအပ်ချက်များကို ပြည်စုံ လုံလောက် အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည် ... ။ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးအတွက် စစ်အင်အား လုံလောက်စွာ ထားရှိရမည် ... ။ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ပြည်သူတို့၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ရယူနိုင်ရမည် ... ။ တကြိမ်၌ ကွန်ဖြူးရှပ်၏ တပည့်တယောက်ကမှ ၎င်းအား နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခွင့် ရရှိပါက မည်သည့် အရာကို ဦးစွာ ဆောင်ရွက်ရမည်နည်းဟု မေးသောအခါ
ကွန်းဖြူရှပ်က ... "ပထမဦးစွာ ပညက်များကိုပြင်ဆင်ရမည်ဟုဆိုကာ "ပညက်ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာသအိုရီ " ကို တင်ပြခဲ့လေ၏
Rectification Names Theory
ပညက်တိုင်းသည် ... ၎င်းရည်ညွန်းသော အရာ၏ အနှစ်သာရကို ဖော်ညွန်းသည် ... ။ ဆိုလိုသည်မှာ ပညက်နှင့် တကယ့် ဖြစ်စဉ်အကြားမှာ ကိုက်ညီမှုရှိရမည် ... ။ အုပ်ချုပ်သူသည် အုပ်ချုပ်သူဟူသော ပညက်ဖေါ်ညွန်းသည့် ဂုဏ်အရည်အချင်းကို ပိုင်ဆိုင်ရမည် ... ။ သို့မှသာ စစ်မှန်သော အုပ်ချုပ်သူဖြစ်၍ အုပ်ချုပ်သူဟူသော ဂုဏ်အင်္ဂါနှင့် ကိုက်ညီပေမည် ... ။